क्यान्सरबाट जोगिन के नखाने ? – rastriyakhabar.com
क्यान्सरबाट जोगिन के नखाने ?
बो,सो,युक्त मासु बोसोयुक्त मासु र जनावरको बो,सो हालेर बनाइएको चिज, बटरजस्ता खाना भरसक खानु हुँदैन । यस्ता खानामा क्या’ ,न्सर लाग्ने जो,खिम बढी हुन्छ । मासुको सट्टा माछा खानु उपयुक्त हुन्छ ।
र’ ,क्सी र’ ,क्सीको ल,त लागेको छ भने दुई पे,गभन्दा बढी खानु हुँदैन । बढी र’ ,क्सी खाएमा मुख, पा,ठेघ,र र स्त,नस,म्ब,न्धी क्या’ ,न्सर लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ । तारेको खाना तारेको र भुटेको खाना बढी खाने गर्नुभयो भने श,रीरमा ए,क्रि,ला,मा,इड नामक तŒवको मात्रा बढ्छ ।
जसले पुरुषमा स,न्तान उत्पादन गर्ने क्षमतामा ह्रा,स ल्याउने र क्या’ ,न्सर लगाउने जो,खिम बढाउँछ । उसिनेको खानामा एक्रिलामाइड तŒव कम हुने भएकाले तारेकोभन्दा उसिनेको खाना स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो हुन्छ ।
रातो मासु सुंगुर र खसीको मासु खान मज्जा आउँछ । तर, यस्ता रातो मासु बढी खाएमा क्या’ ,न्सर लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ । बा,र्बि,क्यू गरिएका मासु र ससेजजस्ता मांस परिकार बढी खानाले पनि क्या’ ,न्सर लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ । यस्ता मासु दिनमा १ सय ४० ग्रामभन्दा बढी खानु हुँदैन ।
नुन हाम्रो शरीरले फास्टफुड, अचारलगायतबाट प्रशस्त मात्रामा नुन प्राप्त गर्छ । त्यसमाथि तरकारी र दालमा पनि नुनको मात्रा बढी हाल्छौँ । दिनमा छ ग्रामभन्दा बढी नुन खानु हुँदैन । तर, हामीले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी नुन दिनहुँ खाइरहेका हुन्छौँ । नुन बढी खाएमा उच्च र,क्तचा,प र हृ, दया,घातसँगै क्यान्सरको जोखिमसमेत बढ्दछ ।